Wararkii ugu dambeeyey dagaalada magaalada Muqdisho duleedka ka aloosan – SBC
Wararkii ugu dambeeyey dagaalada magaalada Muqdisho duleedka ka aloosan
Posted by editor on January 21, 2012 Comments
Dagaaladii ka aloosnaa magaalada Muqdisho ee caasimada ah ayaa caawa la isku habeensadey iyadoo madaafiic ba’an, dayaanka noocyada kala duwan ee hubka iyo waliba rasaas deegaanadii lagu dagaalamay ka ifaysa.
Dagaaladan ayaa dhaliyey khasaare dhimasho iyo dhaawac fara badan waxaana dadka dhintey iyo kuwa dhaawacmayba ka mid ah dad rayid ah oo aan shaqo dagaalka ku laheyn balse deegaanadii ay ku sugnaayeen ay ugu tageen madaafiic shiishwareertey, rasaas wiifto iyo waliba hub kale oo hubsiino iyo hal beegsi loo ridin.
Dhimashada dagaalkii qarxay xaley shaqdii dhexe ee socdey ilaa iyo caawa ayaa waxay u badan tahay dhinacyada dagaalamaya iyadoo la sheegay in ugu yaraan 40 qof oo ka mid ah dhinacyada dagaalka ku lugta inay ku dhinteen dagaalada kuwaasi oo uu ka mid yahaysaraakaal ka tirsan dawlada KMG.
Dadka raydika ah ee dagaalada ku dhinteen ayaa la sheegayaa in ay gaarayaan 9 qof kuwaasi oo ay ka mid yihin afar qof oo madfac uu kula dhacay xaafada Huriwaa.
Dagaaladan ayaa sadex jiho waxaa xaley saqdii dhexe ka qaaday ciidamada AMISOM iyo kuwa DKMG ah waxaana saaka hiirtii waaberi (Jimcaha) u suurgashay ciidamadaasi isbahaysanaya inay riixaan xoogaga Shabaabka ayna kala wareegaan fariisimo muhiim ah oo ay ka mid tahay Jaamacada Muqdisho, Qabuuraha Barakaat, oo ah jiho isku dhaw, iyo Suuqa Xoolaha, Waxara-cade iyo Xerada Maslax halkaasi oo ah jiho isku gadaamaan ayna ku yaaleen fariisimo muhiim ah oo ay Shabaabku leeyihiin.an
Jihada sadexaad ee dagaalku ka dhacay balse aanu aheyn mid u xoogan sida labada kale ayaa aheyd deegaanka Dayniile halkaasi oo dagaalo culus laga soo sheegay.
Sadexda jiho ee ay gulufka weerar ku ekeeyeen ciidamada dawlada iyo kuwa AMISOM ayaa waxaa ka dhacay dagaalo ba’an oo si xun la isugu riiqmay, iyadoo ay ka qayb qaadanayeen taangiyada dagaalka, gawaarida gaashaamaan, iyo ciidamo fara badan.
Duhurnimadii waxaa u suurtagashay ciidamada AMISOM & kuwa DKMG inay si buuxda ula wareegaan goobihii laga dagaalamayey, balse isla xiligaasi waxaa dagaal adag oo rogaal celis ah soo qaaday xoogaga Shabaabka kuwaasi oo ay u suurtagashay inay dib uga soo riixaan ciidamada dawlada iyo kuwa AMISOM goobihii lagu dagaalamayey qaybo ka mid ah.
Goobaha lagu dagaalamay
Xoogaga Shabaabka ayaa jihada ugu xoogan ee ay ilaa iyo hada ka dagaalamayaan oo ay xooga saarayaan waxay tahay dhanka Jaamacada Muqdisho & Qabuuraha Barakaat, halkaasi oo la soo sheegayo in khasaare ba’an labada dhinac in uu soo gaaray, iyadoo ay u muuqanayso in ciidamada isbahaysanaya ay dhaafi waayeen goobihii saaka ay qabsadeen ee ay ka mid tahay Jaamacada Muqdisho waxaana dagaalku uu caawa ku hoydey duleedka qabuuraha Baraakat.
Laakiin ciidamada AMISOM iyo kuwa dawlada waxay ka sameeyeen horumar dhanka dagaalka ah Jihada Suuqa xoolaha waxaana la sheegay in ay gaareen ilaa iyo Ceel Cirfiid oo ay si buuxda ula wareegeen xeradii Maslax oo aheyd saldhig weyn oo ay Shabaabku leeyihiin.
Ciidamada AMISOM & kuwa dawlada ayaa yoolkoodu yahay inay qabsadaan degmada Balcad, iyadoo ay jiraan warar sheegaya inay gacanta ku dhigeen wadada Basra oo 25 km dhanka galbeedka ka xigta Muqdisho iskuna xirta degmooyinka Balcad iyo Afgooye.
Col. C/laahi Caanood oo ka tirsan ciidamada dawlada KMG Soomaaliya wuuxu sheegtey in ay ku qabsadeen dagaaladii maanta Suuqa Xoolaha, Qabuuraha Barakat iyo deegaano kale.
Taliye la diley iyo mid ku baxsadey dirqi
Warar la isku haleyn karo ayaa sheegaya in abaanduulaha ciidamada xooga dalka Jeneral Yuusuf Dhaga-badan in uu ka badbaaday weerar isku day dil ah oo ambush loo dhigay, isagoo ka baxsadey jidgooyo ay Shabaabku u dhigeen xili uu ku socdey goobaha dagaaladu ka socdaan.
Laakiin xoogaga Shabaabku waxay dileen taliye Siciid Cabdi Barre oo ahaa taliyihii Saadka ee ciidamada dawlada & ciidan la socdey oo ka mid ahaa ilaalidiisa, waxaana dilkiisu uu ka dambeeyey markii jidka ay u galeen cutubyo ka tirsan Shabaabka, isagoo xiligaasi ku socdey deegaanada lagu dagaalamayo.
Saraakiil ka tirsan Shabaabka oo ka hadley dilka Col. Siciid waxay sheegteen inay sidoo kale ka heleen baabuurkiisa dukumintiyo muhiim ah, lacag iyo qalab kale ayna soo bandhigi doonaan sida lagu daabacay mid ka mid ah website-yada ku hadla afka xarakada Shabaabka.
DKMG oo qiratey dilka Taliye Siciid
Muxiyadiin Xasan Jurus oo ah Gudoomiyaha degmada Yaaqshiid oo ah degmada ay ka tirsan yihiin qaybo ka mid ah goobaha lagu dagaalamayo ayaa xaqiijiyey dilka Col. Siciid Cabdi Barre, isagoo sheegay in jidka loo galey baabuurka uu watey taliyaha.
AMISOM oo ka hadashay dagaaladan cusub
Afhayeenka Ciidamada AMISOM Captain Paddy Akunda oo Shir Jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay Dagaalada weeerarka ah ee saakay Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowlada ku ekeeyeen fariisimaha Al-Shabaab kaga sugnaayeen magaalada Muqdisho.
Dhiilooyin colaadeed gurmadyo iyo cabsi dagaal oo ka tagaan goobihii lagu dagaalamay
Waxaa wali jawi colaadeed iyo gurmad urursi xoogan uu ka socdaa deegaanadii lagu dagaalamaya, iyadoo la soo sheegayo in dhinacyada dagaaladan ku lugta leh ay wadaan gurmad xoogan oo ay dib isku urursanayaan.
Xarakada Shabaabka ayaa la sheegay in gurmad xoogan oo ciidan uu uga imaanayo gobolada Shabeelaha dhexe, Shabeelaha hoose iyo waliba deegaanada loo barakacay oo ay ka mid tahay Ceelasha biyaha, waxaana jira warar muujinaya inay xooga saarayaan dhanka Qabuuraha Barakaat & Jaamacada Muqdisho oo ay gurmad xoogan ku soo gurayaan.
Sidoo kale ciidamada AMISOM iyo kuwa dawlada KMG ayaa wada inay adkeeyaan difaaca goobaha ay qabsadeen waxaana ay qoteen dhufeyso adag iyagoo doonaya inay sii wadaan dagaalka oo haatan u muuqanaya in la iskula baxayo dhul banaan.
Wixii warar ah ee ku soo kordha dagaaladaasi kala soco SBC insha ALAAH.